मलखादमा धोका दिने ठेकेदारलाई जेल सजायको माग’ - NewsCenterNepal.com
नरेश के.सी. भैरहवा-
ठेक्कामा गयो देश
ठेकेदारले खाने भो
हामी कता जाने हो ।।
जनआन्दोलन भाग २ उत्कर्षमा पुगिरहदा रुपन्देहीमा माथिका वाक्यांश सहितको रोइलाले खुब चर्चा पाएको थियो । युवा कवि छवि ज्ञवालीको रचना रहेको उक्त रोइलामा देश ठेकेदारको हातमा पुगेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।
आन्दोलन सफल भयो, देशमा शासन व्यवस्था फेरियो, शासकहरु फेरिए तर शासन प्रवृति भने उस्तै देखिएको छ । १५ बर्षपछि आज पनि ज्ञवालीले भने झै जनताहरु देश ठेकेदारको हातमा गएको भन्दै चिन्ता गरिरहेका छन् ।
कोरोना महामारीको बेला स्वास्थ्य किटमा ठेकेदारको बद्मासीको घटना सेलाउन नपाउदैं फेरि किसानको मलखादमा ठेकेदारको बद्मासी उदांगो भएको छ । राज्य संयन्त्र खरिद गरेका ठेकेदारहरु सांझ बिहान आफुले खाने चामलसंग पनि धोकाधडी गरिरहेका छन् । उनीहरु रत्तिभर डराउदैंनन । किनकी उनीहरुलाइ शासन सत्ताको आर्शिवाद हुन्छ । तर यसपटक घटनाले नया मोड लिएको छ, बडो हिम्मत गरेर कृषी मन्त्री घनश्याम भुसालले ठेकेदारलाइ कारबाहि गर्ने आंट देखाएका छन् । उनको हिम्मतलाइ लिएर सामाजि सन्जालमा ठूलो प्रशंसा गरिन थालेको छ । तर ठेकेदारका एजेन्टहरुले भुसालका कमिकमजोरी खोजेर यहि निहूंमा मन्त्री पद खुस्काइदिने प्रयासमा पनि लागिरहेका छन् ।
यसैबीच हामीले भुसालको निर्वाचन क्षेत्रका केहि अगुवा किसानहरुसंग मलखाद र भुसालले चालेको कदमको बारेमा केहि प्रतिक्रिया लिएका छौं । किसानहरुले तोकिएको समयमा रासायनिक मल आपूर्ति नगर्ने ठगहरुलाई जेल हाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
कृर्षी तथा पशुपंक्षि विकास मन्त्री भुसालको निर्वाचन क्षेत्र रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ का अगुवा किसानहरुले सरकारी कदमको स्वागत गर्दै बदमासी गर्ने ठेकेदारलाइ आजिवन कारबास पठाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
उनीहरुले एकैस्वरमा भनेका छन, ‘ल्याउछु ल्याउछु भनेर अन्तिम समयमा पनि नल्याउने ठगहरुलाई जेलमा कोच्नुपर्छ । ’
सियारी मिलनचौंकका अगुवा किसान डबल बहादुर घर्तिले भने ‘सम्झौता गरेर धोका दिने ठेकेदारलाई धरौटी जफत गरेर मात्रै हुदैंन । जेल नै हाल्नुपर्छ । सरकारले अझै कडा कदम चाल्नुपर्छ । ’
अर्का किसान दलबहादुर क्षेत्रीले भने ‘मलखाद, बिउ, बिजन जस्तो व्यवस्थापनको काम राज्यले आफै गर्नुपर्छ । ठेकेदारलाई दिनु नै हुन्न । ’ क्षेत्रीले धान पसाउने समयमा मलखाद हाल्न नपाउदा किसानहरु तड्पीरहेको पनि बताए । उनले भने ‘धान पसाउने बेला भयो , यस्तो बेला युरीया हालिएन भने धान नैै फल्दैन । ’
क्षेत्रीले बद्मास ठेकेदारसंग सम्झौता मात्रै रद्ध गरेर नपुग्ने भविष्ययमा उनीहरुलाई कुनै पनि ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउनेगरी कारबाहि गर्न पनि आग्रह गरे ।
मर्चवारी गाउपालिकाका किसान रामाशंकर अहिरले समयमै मलखाद नल्याउने ठेकेदारलाई सरकारले गरेको कारबाहिले किसानहरु खुसी भएको बताए । उनले भने, ‘हरेक बर्ष मलखादको समस्या हुन्छ । तर यो पटक कारबाहि भएको छ । अर्को पटक त मल ल्याउने सम्झौता गरेकोले धोका दिन्न यति भएपछि । ’
सियारी वडा नम्बर ६ का कृषक मणिराम थारुले गाइभैसीको मलखाद प्रयोग गर्ने तर्फ बिस्तारै लागिरहेको बताए । उनले भने ‘अर्काको देशबाट आउने मलको के भर परेर बस्नु , गाइभैसीको मल हाल्यो ढुक्क । ’
अर्को अगुवा किसान कमला सापकोटालाई पनि यतिबेला खेतमा हाल्ने युरिया चाहिएको छ । उनको खेतमा लगाएको धान पसाउन लागेको छ तर मलखादको कमिले भने जस्तो हुर्किन सकेको छैन । युरियाकोलागि दौडधुप गरिरहेकी सापकोटाले सहकारी मार्फत डिएपी भने पाइने तर युरिया पाउनु भएन । साबा, राम, गोरखनाथ जातको विउ लगाएकी सापकोटाले भनिन ‘युरिया पाइएकै छैन । धान पसाउने समय भयो । ’
समयमै मलखाद पाउने आशामा ज्ञानविज्ञान सहकारी संस्था र शुद्धोधन सहकारी संस्था गरी दुइवटा सहकारीमा आवद्ध रहनुभएको सापकोटालाई प्रायाप्त मलखाद नहाल्दा यस बर्ष धानको उब्जनी कम हुने डर बढेर गएको छ । उनले भनिन, ‘खाद नै राम्रोसंग नहालेपछि के उब्जनी होला र ? ’
किसानलाई चाहिएको बेला मलखाद दिने प्रतिबद्धता सहित ठेक्का लिएर धोका दिने ठेकेदारलाइ राज्यले कारबाहि गरेको खबर पाएपछि सापकोटा खुसी भएकी छन् । ‘सबै ठेकेदारले विगारेंका हुन, कृषि मन्त्रीले ठग ठेकेदारलाई कारबाहि गरेको सुनेको छु । त्यस्ता बद्मासलाई कारबाहि भयो भने अर्को साल समयमै मलखाद पाइएला । ’
उनले भनिन ‘कृषि प्रधान देशमा किसानलाइ चाहिने मलखाद पुराउने जिम्मा राज्यकै नै होला तर अहिले सम्म हुन सकेन । तर ढिलै भएपनि कृषीमन्त्रीले किसानको पक्षमा कदम चाल्नुभएको छ । ’
पुर्व कृषी तथा सहकारी राज्यमन्त्री ओमप्रकाश यादव ‘गुलजारी’ ले किसानलाई चाहिएको बेला मल दिन्छु भनेर सरकारसंग ठेक्का गर्ने तर मलखाद नदिने ठेकेदारलाई कडा कारबाहि गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो समस्या पहिले देखिको हो । यसपटक घनश्याम जीले ठूलो हिम्मत गर्नुभएको छ। हामी उहांले चालेको कदममा साथ दिन्छौं । ’
धानमा रोप्नु भन्दा पहिले हिलोमा दुईभाग डीएपी र एकभाग युरिया हाल्नुपर्छ । यसैगरी धान रोपेको २२ दिनपछि प्रतिकठ्ठा युरिया र जिंक हाल्नुपर्छ । त्यसपछि पसाउनेबेला युरिया हाल्नु पर्दछ । यतिबेला धान पसाउने समय हो ।
नेपाल सरकार कृषी मन्त्रालयले धान पसाउने बेला सम्म पनि युरीया मल सप्लाई दिन नसकेको भन्दै दुई ठेकेदार कम्पनिको धरौटी समेत जफत गरेर कालो सूचिंमा राख्ने तथा भविष्यमा अन्य ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउनेगरी कारबाहि अगाडी बढाएको छ । कृषी मन्त्रालयले शारदा प्रसाद अधिकारीको शैलुंग इन्टरप्राइजेज र हुमनाथ कोइरालाको हानोको मल्टिप्रपोज कम्पनिलाई तोकिएको समयमा मलखाद उपलब्ध नगराएको हुदा धरौटी सम्झौता रद्ध गर्ने, जफत गर्ने र थप कारबाहि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
ती कम्पनिहरुले भदौं २० गते सम्म ५० हजार मेट्रिक टन मलखाद ल्याउनेगरी सरकारसंग सम्झौता गरेका थिए । शैलुंग इन्टरप्राइजेजले प्रतिमेट्रिक टन ३२०।२५ डलरमा र हानोको मल्टिप्रपोजले ३९०।९० डलरमा मल ल्याउनेगरी सम्झौता गरेका थिए ।